TCL waxay ku soo bandhigi doontaa taleefankeeda casriga ah kii ugu horreeyay ee ay iska leedahay IFA 2019 | Androidsis
Eder Ferreño | | IFA, Mobiles
IFA 2019 ayaa qaabeynaysa, waxaanan arki karnaa in noocyo badan ay goobjoog ka ahaan doonaan dhacdadan. TCL waa mid ka mid ah noocyada ugu dambeeyay ee lagu xaqiijinayo joogitaankeeda munaasabadda ka socota caasimadda Jarmalka. Xaaladdaada, waxay noqon doontaa soo bandhigid muhiim ah, maxaa yeelay waxaad naga tagaysaa adiga taleefanka ugu horeeya Markii ugu horeysay ee lagu bilaabo magacaaga.
TCL waxay leedahay shirkado sida Alcatel, kaas oo ay ku bilaabayaan taleefan isku laaban sanadka 2020. Laakiin markan waxay isku diyaarinayaan inay soo saaraan waxa noqon doona qalabkoodii ugu horreeyay ee sumaddooda u gaarka ah. Waan awoodi doonaa inaan ogaano toddobaadkan ee daabacaadda IFA.
Waxay noqon doontaa Sebtember 5Khamiistaan, markaan si rasmi ah u ogaanno taleefanka ugu horreeya ee TCL. Marka waa inaan sugno waqti gaaban si aan uga ogaano wax kasta oo ku saabsan qalabkan soo saaraha. Intaas waxaa sii dheer, shirkaddu waxay xaqiijisay inay nooga tagi doonaan sheeko cusub oo badan munaasabaddan ka dhacday Berlin.
Tan iyo markii lagu daro taleefanka, waan sugi karnaa nooc cusub oo shaashad isku laaban ah, shaashad la qaadan karo iyo qalab na siin doona khibrad daawasho oo ah shaashad 100-inji ah, laakiin leh muraayadaha muraayadaha indhaha. Marka calaamadu waxay raadineysaa inay la yaabto dhacdada.
Waxba kama ogin wax ku saabsan taleefankan casriga ah ee u gaarka ah ee TCL naga tagayo. Faahfaahin lagama bixin. ku saabsan qeexitaankiisa, mana jiraan sawirro ku saabsan. Marka waa inaan sugnaa ilaa Khamiista si aan wax uga ogaano wax walba oo ku saabsan. Illaa ay jiraan wax daadanaya maalintaas ka hor.
Shaki la'aan, IFA-da 2019-ka ayaa ballanqaadaysa inay ahaato dhacdo muhiimad weyn u leh TCL. Maaddaama ay hadda ku dhiirradeen inay soo furaan taleefan ka hooseeya magacooda. Waan arki doonaa haddii qaabkani uu leeyahay daah-fur caalami ah iyo in kale, iyo haddii aan awoodi doonno inaan ku iibsanno Spain muddo yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » TCL si loo soo bandhigo Taleefanka Magaca Magaca Hore ee IFA 2019
Sifeeyay naqshadeynta iyo qeexitaanka Lenovo A6 Note